Realme bụ nke anọ kachasị ama ama na India | Gam akporosis
Realme na-egosipụtakwa onwe ya dị ka ika ama ama ama ama nke anọ nke India
N'oge a, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na nnukwu ụlọ ọrụ na-akụ nzọpụta ndị enyemaka na mpaghara dị iche iche ma họrọ. Nke a bụ ihe gbasara Huawei na Honor (nke ikpeazụ dị ugbu a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa niile) na Oppo Realme, n'etiti ndị ọzọ; Xiaomi na Redmi bụ ihe atụ ọzọ. Nke a abụrụla atụmatụ ga-ekwe omume nke na-akwụ ụgwọ maka ndị nrụpụta buru ibu ma mekwaa ahịa ha.
Nsọpụrụ, n'otu aka, nwere ezigbo ewu ewu na ahịa ma na-edekọ ezigbo ego, ebe Realme, n'aka nke ọzọ, n'agbanyeghị na ọ nwere mba ole na ole (ugbu a na-agbasawanye na Europe y y emeela ya na China), enwere ike ikwu otu ihe ahụ, ọbụnakwa karị ma a bịa India, isi ụlọ ọrụ ya. Ebe ahụ ụlọ ọrụ smartphone a dị ka nke anọ kachasị mkpa, maka oge nke atọ na esepu.
Nnyocha Nyocha depụtara ọkpụkpọ ọhụụ n'ihu ụlọ ọrụ nne na nna ya, bụ Oppo, n'ihe banyere oke ahịa. N'ezie, Realme nwere òkè ahịa 9%, mmụba dị ịrịba ama na ahịa ya nke 1% n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. Ọ nọ n'ọkwa nke anọ mgbe Xiaomi, Samsung na Vivo gasịrị.
Firmlọ ọrụ nyocha ahụ kpughere nke ahụ N'ezie zitere m 1 nde nkeji nke Gbanwee C2. Ọ bụkwa akara kachasị na India iji ruo 8 nde ama ama na afọ mbụ ya.
Ọzọkwa, Realme na-ekwukwa na ọ setịpụrụ ndekọ ụlọ ọrụ ọhụụ na ekwentị ọhụrụ ya, el Ezigbo 3i, nke rere 150,000 naanị na 30 nkeji, bu eziokwu nke kwesiri ka a gosiputa ya, dika o na egosiputa oke nke ndi ochichi nke India banyere ika a.
Redmi na Realme ga-ejikwa Snapdragon 855 Plus
A mara ọkwa Realme 3i n'akụkụ Real X na July 15. Gbanwee processor Helio P70 na 3 bu eziokwu site na chipset Helio P60, ma na-ekwusi ike na nkọwa ndị ọzọ. Ọ dịkwa ọnụ ala ma na-abịa na agba ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme na-egosipụtakwa onwe ya dị ka ika ama ama ama ama nke anọ nke India
Varidị ụdị agba ọhụrụ mara mma nke Redmi K20 Pro ga-ere ahịa n'oge na-adịghị anya
Samsung na-enyocha ihuenyo ekwentị nke na-egosiputa ihe ngebichi